၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXIV | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXIV
၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXIV
Posted by Kyaemon on Mar 24, 2018 in Business & Economics, Education, Photography, Think Different, Think Tank, Travel | 1 comment
၊Amsterdam Holland ၊ဟော်လန်နိုင်ငံလေဆိပ်မှာ ၊ဘီဝိုင်ဒီတရုပ်နိုင်ငံလုပ်လျှပ်စစ်ကား၃၅စီးပြေးစွဲ
တရုပ်ဘီဝိုင်ဒီကBogota Columbia ၊၊တောင်အမေရိကတိုက်၊ကိုလန်ဘီယာနိုင်ငံ
၊ဥရောပတိုက်အလယ်ပိုင်း၊Hungary ၊ဟန်ဂါရီနိုင်ငံမှာ၊ တရုပ်နိုင်ငံဘီဝိုင်ဒီကားအဖွဲ့က
၊တောင်အမေရိကတိုက်Chile ၊ချီလီနိုင်ငံ ၊အများပြည်သူပို့ဆောင်ရေးအပိုင်းမှာ
။အာဖရိကတိုက်၊အိဂျစ်နားကမော်ရိုကိုနိုင်ငံMorocco ၊မှာတရုပ်နိုင်ငံ “Yangtse”၊ရန်ဇီကားစက်ရုံလုပ်
၊လျှပ်စစ်သုံး Ancheer ၊တံဆိပ်စက်ဘီးအကြောင်း
Dunhuang Mogao Caves၊၊ဒွန်ဟောင်မြို့နားကမိုဂေါလှိုဏ်ဂူတွေကိုသွားဖူးမယ်။
ခူချိန်ထိ၊အဲဒီမြစ်၇စင်းအနက် တစင်းတလေကမှ မကောပါ၊ကောမှာလဲမဟုတ်ပါ၊
ဥပမာအားဖြင့် Hai၊ဟိုင်းမြစ်နဲ့တျန်းဂျင်း ၊Tianjinအကြောင်းကိုအောက်ပိုင်းမှာဖော်ပြထားတယ်၊
တချိန်တုန်းကDanes ၊ဒိန်းလူမျိုးတို့ရဲ့ဘုရင် King Canute၊ကနွတ်က Denmark။ဒဲန်းမတ်တဝှိုက်နဲ့၊
(၊သင်ခဏ်းစာ ၊အဲဒီဧကရာဇ်လိုလူပုံလယ်မှာအရှက်တကွဲ”၊ဝိုင်းဟား”၊ခြင်းမခံရဘို့က ၊အရေးကြီးပါတယ်၊
၊မြစ်ဆုံကိုကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ် မြစ်ဆုံကိစ္စအထမြောက်သွားရင် အရင်ဆုံးဧရာဝတီမြစ်ကိုမှီခိုနေရတဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှဒုက္ခရောက်မယ် နောက်ပိုင်းဧရာဝတီမြစ်ဆိုတာတောင် ပါးစပ်ပုံပြင်လိုဖြစ်သွားမယ်၊၊၊၊
၊မြစ်ဆုံပြိးလို့က တော့မြန်မာနိုင် ငံသွားပြိဟေ……….ဧရာဝတိက မြန်မာရဲ့MAINဆိုတာမသိကြဘုးလားနိုင့်ငံခေါင်းဆောင်ကြိးတွေ အစိုးရ တွေ
ဧရာဝတီရဲ့အသက်က မေခနှင့်မေလိခပါ အဲ့ဒါကိုစီမံကိန်းလုပ်လိုက်ရင်
၊ ကျနော် ကအမြဲမှန်တယ်လို့မဟုတ်ပါ၊
၊ဒေါက်တာRobin Charlwood, Civil Engineer ၊ရိုဘင်ခြားဝုဒ် က၂၀၁၃ကထဲကထောက်ပြခဲ့တယ်၊
၊ဦးထွန်လွင်ပြောတဲ့ထဲမှာHai (Haihe) ၊ဟိုင်းမြစ်လဲကောပြီလို့ပါတယ်၊
၊အဲဒီHai ၊ဟိုင်းမြစ်ပေါ်ကဆိပ်ကမ်းမြို့ Tianjin၊
၊တျန်ဂျင်းမှာတပ်ဆင်တဲ့Airbus A 320၊အဲဘတ်စ်၊ (၊ဥရောပနဲ့တရုပ်ဖက်စပ်စက်ရုံ)
Algeria၊၊အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော် Algiers၊အယ်ဂျီးရာ အတွက်၊
Cutting-edge electric luxury cars from China at Geneva Motor Show 2018
The first made-in-China large commercial aircraft, C919, rolled off production lines on Monday, following7years of design and assembly. This comes as China has stepped-up efforts in achievingadomestically made “big plane” fleet. Click the video as CCTVNEWS offers you an exclusive sneak peek of the C919 aircraft assembly!
Myitsone, လွမ်းပိုင်, ခလိန်း တျောက်ပါ and 352K others